Ukuthengisa ukuXhobisa | Iphepha 2 of 86 | Martech Zone
Itekhnoloji yokunika amandla ukuthengisa, kubandakanya amaqonga olawulo kubudlelwane babathengi, avumela iinkampani ukuba ziqokelele, zichonge kwaye zenze uphando ngethemba, zibancede ukuba balungiselele imisebenzi enxulumene nokuthengisa kwaye ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo banxibelelane ngezibonelelo zabo kunye neempawu zabo kumthengi.
I-Linq: Umboneleli wakho woNxibelelwano lweeNgingqi ezikufuphi (NFC) Iimveliso zeKhadi leShishini
NgoLwesihlanu, Julayi 9, 2021 NgoLwesihlanu, Julayi 9, 2021 Douglas Karr
Ukuba kudala ufunda indawo yam, uyazi indlela endonwabe ngayo ndifumana iintlobo ezahlukeneyo zamakhadi oshishino. Ndinamakhadi okuphawula emva kwawo, amakhadi asikwere, amakhadi esinyithi, amakhadi alaminethiweyo… ndiyazonwabela kakhulu. Ewe kunjalo, ngokutshixa kunye nokungakwazi ukuhamba, kwakungekho sidingo sikhulu samakhadi oshishino. Ngoku ukuhamba kuvula, nangona kunjalo, ndaye ndagqiba kwelokuba lixesha lokuba ndihlaziye ikhadi lam kwaye ndilifumane
Izizathu ezili-9 zokuba kutheni ukuTyala imali kwiSoftware yoThengiso oluThunyelweyo lolona tyalo mali lubalaseleyo kuHlumo lweShishini lakho
NgoMvulo, Meyi 24, 2021 NgoMvulo, Meyi 24, 2021 Ekalavya Hansaj
Xa kuziwa ekukhuleni kweshishini, ukusetyenziswa kwetekhnoloji akunakuphepheka! Ukusuka kumama omncinci kunye nakwiivenkile zepop ukuya kumashishini amakhulu, ayinakuphikwa ukuba utyalomali kubuchwephesha uhlawula kakhulu kwaye uninzi lwabanini bamashishini ababuqondi ubunzima botyalo-mali kwezobuchwephesha. Kodwa ukuhlala ngaphezulu kwitekhnoloji yokuqhubela phambili kunye nesoftware ayisiyonto ilula. Uninzi lwezinto onokukhetha kuzo, ukhetho oluninzi… Ukutyala imali kwisoftware efanelekileyo yokuthengisa ishishini lakho kubalulekile kwaye
Ukufikelela kwintengiso: Amacandelo amathandathu aPhumelela iintliziyo (kunye nezinye iingcebiso!)
NgoLwesibini, Meyi 18, 2021 NgoLwesibini, Meyi 18, 2021 UDavid Wachs
Ukubhala iileta zeshishini yingqondo ebuyela emva kwixesha elidlulileyo. Ngelo xesha, iileta zokuthengisa ngokwasemzimbeni yayiyeyona nto yayijolise ekutshintsheni abathengisi bendlu ngendlu kunye neepaki zabo. Amaxesha anamhlanje afuna iindlela zale mihla (jonga nje utshintsho kumboniso wentengiso) kunye nokubhala iileta zentengiso zeshishini akukho ngaphandle. Eminye imigaqo ngokubanzi malunga nefom kunye nezinto zeleta elungileyo yokuthengisa zisasebenza. Oko kwathiwa, ubume kunye nobude beleta yakho yeshishini buxhomekeke kuyo
Ukuphuma: Yandisa umxholo wakho weNtengiso ye-ROI kunye noMxholo oDibeneyo
NgoLwesihlanu, Meyi 14, 2021 NgoLwesihlanu, Meyi 14, 2021 Douglas Karr
Kwipodcast yakutshanje noMarcus Sheridan, uthethe ngamaqhinga oshishino aphosakeleyo xa bephuhlisa iinzame zabo zentengiso yedijithali. Ungamamela sonke isiqendu apha: Esinye isitshixo awathetha ngaso njengabathengi kunye namashishini aqhubeka nokuzilawula ngokwabo kuhambo lwabathengi ngumxholo wokudibana. UMarcus ukhankanye iintlobo ezintathu zomxholo osebenzayo owenza ukuba isikhombisi-ndlela sakho: Ukucwangciswa ngokwakho-ukubanakho kwethemba lokuseka
IBotco.ai: Isisombululo seHIPAA-esihambelanayo nesisombululo seNtengiso
NgoLwesine, Meyi 6, 2021 NgoLwesine, Meyi 6, 2021 Douglas Karr
Iqonga lencoko leHIPAA-elihambelana neBotco.ai liyaqhubeka ukuqhubela phambili, longeza ukuThengiswa kweNgxoxo yokuNgqinelana kunye nedeshibhodi ye-analytics ephambili. Umxholo weNtengiso yeNtetho wenza ukuba abathengisi baqalise iincoko ezenzelwe wena kunye nethemba kunye nabathengi ngokusekwe kwindlela abatyelele ngayo iwebhusayithi yenkampani okanye iipropathi zemithombo yeendaba. Ideshibhodi entsha yohlalutyo ibonelela ngolwazi olunzulu kwimibuzo yabatyeleli kunye nokuziphatha. Ngokudityaniswa nokudityaniswa kweBotco.ai nge-imeyile, i-CRM, kunye nezinye iinkqubo zentengiso, ukuThengiswa kweNgxoxo ngokuNgqinelanayo kuzisa inqanaba lokuzenzela incoko
Umxhasi oxhasa ukuthengisa